kuvhuraSUSE Leap 15.2 ikozvino yave kuwanikwa uye nerutsigiro rweimwe AI | Kubva kuLinux
kuvhuraSUSE Leap 15.2 ikozvino yave kuwanikwa uye nerutsigiro rweimwe AI
Shanduro itsva ye kuvhuraSUSE Leap 15.2 yakazoburitswa uye inouya neshanduko dzinobatsira uye kugadzirisa, izvoinoratidzira rutsigiro rwakawedzerwa rwekushanda nemamwe maturusi enhema (AI) senge Tensorflow, PyTorch uye Prometheus, pamwe nekuvandudzwa kwekushanda nemidziyo.
Kune avo vachiri kusaziva nezve chirongwa kuvhuraSUSE, vanofanira kuziva izvozvo kuedza kusimudzira Linux mumamiriro ese ezvinhu., inodzorwa nharaunda yayo uye inovimba nemipiro kubva kuvanhu vanoshanda sevanoedza, vanyori, vashanduri, nyanzvi dzeergonomics, vamiriri, kana vanogadzira.
Icho chirongwa icho inovhara akasiyana matekinoroji uye iyo yakavhurikaSUSE Leap yekuparadzira inouya seyakazara, yakagadzikana uye nyore-kushandisa-shanduka inoshanda system.
1 OpenSUSE Leap 15.2 Main Zvitsva Zvimiro
2 Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15.2
OpenSUSE Leap 15.2 Main Zvitsva Zvimiro
Iyi vhezheni itsva ye openSUSE Leap 15.2 inosanganisira zvekuchengetedza, zvakakosha mapakeji nyowani, kugadzirisa bug uye kumwe kugadzirisa.
Asi pane zvese shanduko zvinosanganisirwa mu openSUSE Leap 15.2, imwe yeiyo huru uye iyo inogona kutariswa sechinhu chikuru ndechekuti ikozvino kugovera kunogona shandisa masisitimu ekudzidza emuchina uye maapplication uye kudzidza zvakadzama kuburikidza nekuwedzera rutsigiro rwe Tensorflow, PyTorch, ONNX, Grafana, uye Prometheus.
Kana iri system kernel, Tinogona kuwana iyo Linux Kernel v5.3.18. Ichi chiitiko kuLinux Kernel v4.12, yaive muLeap v15.1. Iyo Leap kernel yakafanana neiya inoshandiswa muSUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2.
Kunyangwe zvisiri izvo zvese, nekuti yakavhurikaSUSE Leap 15.2, chaiyo-yenguva kernel yakaunzwa kubata microprocessor kuwiriranisa kuitira kuti ubudirire kubata zviitiko zvakakomba.
Imwe shanduko inomira kubva pane iyi nyowani vhezheni ye openSUSE ndeyekuti Kubernetes inosanganisirwa muhofisi yepamutemo. Izvi zvinoitirwa kubatsira vashandisi vekupedzisira kuti vashandise nyore nyore deployments, saizi, uye manejimendi ekushandisa ekushandisa.
Helmamu (maneja wepakeji weKubernetes) inosanganisirwa. Kwete kungogumira pane izvo, iwe unowana zvakare zvimwe zvinowedzerwa pano neapo zvinoita kuti zvive nyore kuchengetedza uye kuendesa makomputa ekushandisa.
Pamusoro peizvozvo iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvinoverengeka zvinowedzerwa izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchengetedza uye kuendesa makomputa ekushandisa
Kune rimwe divi, iko kuvandudzwa mu nzvimbo yedesktop iri Plasma 5.18 LTS, ichi chiri chechitatu chenguva refu rutsigiro kuburitswa kubva ku KDE Plasma timu.
Leap 15.2 inosanganisira iyi nyowani LTS vhezheni kunyangwe ichizogadziridzwa uye nekuchengetedzwa neveKDE vanopa kune maviri makore anotevera (akajairwa mavhezheni anochengeterwa kwemwedzi mina). MuPlasma 4, zvitsva zvinogona kuwanikwa Dzinoita kuti zviziviso zvijeke, marongero awedzerwe zvakanyanya, uye kutaridzika kwese kunakidze.
Uyewo, iyo yakavhurikaSUSE inosimudza yawana kugadziridzwa izvo zvandinoziva Vakawedzera rumwe ruzivo, rutsigiro rwemitauro yekurudyi-kuruboshwe seArabic, uye shanduko dzisinganzwisisike kuti zvive nyore kusarudza sarudzo panguva yekumisikidza.
Pakupedzisira imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani, ndiko kuvandudzwa kweYaST.
Kunyangwe chokwadi chekuti YaST yatove yakasimba yekumisikidza uye yekumisikidza chishandiso, iyi vhezheni inowedzera kugona kugadzira nekugadzirisa Btrfs faira sisitimu uye kushandisa epamberi encryption michina.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva nezve kuwanikwa kwe openSUSE pane Windows subsystem yeLinux. Naizvozvo, neLeap 15.2, kuenderana kweYaST neWSL kwakagadziridzwa zvinoenderana nezvakaburitswa manotsi.
Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15.2
Kune avo vanofarira kugona kuyedza iyi vhezheni itsva ye openSUSE Leap 15.2, vanogona kuwana mufananidzo weiyo system kubva pawebhusaiti yepamutemo yekuparadzira.
Iyo yekubatanidza yekuwana mufananidzo ndeuyu.
Kana vari avo vachiri muchikamu chakapfuura uye vachida kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni, ivo vanogona kugadzirisa yavo yazvino kuisirwa kune iyi nyowani, vanogona kutevera iyo mirayiridzo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » kuvhuraSUSE Leap 15.2 ikozvino yave kuwanikwa uye nerutsigiro rweimwe AI
Elementary OS 5.1.6, vhezheni inovandudza zvimwe zvezvinhu zvekushandisa
Firefox 78 iri pano, ziva nhau dzayo uye chinonyanya kukosha shanduko